(XAMARWEYNE.COM):-Kubad qaabeeyaha Kooxaha Chelsea Eden Hazard ayaa gabi ahaanba liiska ka saaray in kooxaha Arsenal iyo Man Utd ay sanadkaan awood u leeyihiin inay u tartamaan Horyaalka England – Premier League . Hazard mar
Natiijada horyaalada Talyaaniga ,Spain iyo Britain+SAWIRO
(XAMARWEYNE.COM):-Waxaa shalay iyo doraad la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalada kubada cagta heerka koowaad ee dalalka Spain .Britain iyo Talyaaniga. Hadii aan ku how marno Talyaaniga waxaa hogaanka wali u haya Juventus oo leh
(XAMARWEYNE.COM):-Waxaa xalay iyo shalay galab la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalada kubada cagta Dalalka Britain,Italy,Germany iyo Spain kuwaasoo qaarkood ahaayeen kulamo aad u adag. SPAIN: Horyaalka Spain hadaan ku hor marno waxaa iska hor
Natiijada horyaalada Talyaaniga iyo Spain+SAWIRO
(XAMARWEYNE.COM):-Kulamadii shalay iyo Maanta la ciyaaray Horyaalka Talyaaniga halkaan ka aqkhriso iyadoo wali hogaanka ay hayaan xidigaha Juventus waxaana kaalinta labaad ku jirta Milan halka roma oo caawa waqti danbe ciyaareysa ay ku jirto
(xamarweyne.com):-Kooxda Liverpool ayaa caawa guul muhiim ah ka gaartay kulankeeda 11aad ee Horyaalka England – Premier League markii ay 6-1 kaga adkaatay kooxda Watford waxayna hada hayaan hogaanka horyaalka oo markii asbuucyadii danbe shirko
(xamarweyne.com):-Kooxda JKubada Cagta Chelsea oo ka mid ah kooxaha ugu awooda badan Horyaalka England – Premier League ayaa xalay guul weyn gaartay markii ay kulankooda 11aad isku arkeen kooxda Everton. Chelsea ayaa ku adkaatay
(xamarweyne.com):-Inta badan waxaa shalay iyo xalay la ciyaaray kulamada England – Premier League waxaana xusid mudan inay guulo wada gaareen kooxaha isku haya kaalinta koowaad kuwaasoo ku kala badan farqiga xaga goolasha laakiin xaga
Kulamadii la ciyaaray iyo kuwa harsan Horyaalka Spain
(Xamarweyne.com):-Waxaa halkaan idinku soo gudbineynaa natiijada tartanka kubada cagta ee Horyaalka Spain gaar ahaan kuwii ugu danbeeyay. Waxaa xusid mudan in xidiga kooxda real Madrid Ronaldo uu xalay dhaliyay sedexley markii kooxdiisu 4-1 kaga
VIDEO+SAWIRO: Kooxda Chelesea oo cashir u dhigtay Man Utd
dr.yare October 24, 2016 0
(xamarweyne.com):-Kooxda Kubada Cagta Chelsea ayaa xalay darsin goolal ah waxay kaga adkaadeen kooxda ay xifaaltamaan ee Maan Utd kulanka 9aad ee England – Premier League. Goolajs ay ku badiyeen Kooxda Chelsea waxaa u kal